“राष्ट्रियताका लागि मेरो उम्मेदवारी” « News of Nepal
“राष्ट्रियताका लागि मेरो उम्मेदवारी”
२०५४ सालमा एमालेका तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २३ मा वडा सदस्य भइसक्नुभएका अहिलेका एमालेका तर्फबाट सोही वडाको वडाअध्यक्षमा भिँड्दै गर्नुभएका मच्चा राजासँग चुनावी रणनीतिका बारेमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपतपाईंको उम्मेदवारी किन ?
मेरो उम्मेदवारी वडा नम्बर २३ को समग्र विकासका लागि हो। मैले वडा नम्बर २३ लाई बुझेको छु। २०५४ सालमा वडा सदस्य भएर काम गरेको हुँ। यहाँको आवश्यकता मलाई थाहा छ। समस्यासँग म खेलेको मान्छे हुँ। मलाई कसरी विकास र उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा छ। यो वडामा मैले विभिन्न खालका चुनावी रणनीति र विकासका योजनासहित मैदानमा उत्रिएको हुँ।
तपाईंका चुनावी रणनीतिहरु खास के–के छन् त ?
हामीले २३ नम्बर वडाका लागि केही रणनीति बनाएका छौं। हामीले प्रतिबद्धता पनि गरेका छौं। योजना तर्जुमादेखि सामाजिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जेष्ठ नागरिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरणदेखि अन्य शान्ति शुरक्षा र विकास निमार्णका कार्यक्रमसम्म पनि हाम्रो योजनामा छन्।
यी त तपाईंले जितेपछि गर्ने कामको योजना भयो। यस्ता योजना सबैकका छन्।
खास जित्ने आधार के हो तपाईंको ?
नेकपा एमालेप्रति जनताको माया छ। राष्ट्रियताका लागि पनि नेकपा एमालेलाई जनताले खोजेका छन्। विकासका काममा पनि एमालले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरिरहेको छ। एमालले जनतालाई गर्छु भनेको काम कहिल्यै ढाँटेन। युवा, जवान, महिला, बृद्ध सबैको प्यारो भएको छ। देश संकटमा परेका बेला अग्रपंत्तिमा उभिएको छ। खास जित्ने आधार हाम्रो हामी जनताका लागि राजनीति गरेका छौं त्यही हो जनताको साथ पाउने आधार।
कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ त ? वडा अध्यक्षमा बाजि मारिएला ?
पक्कै पनि मैले जित्ने निश्चित भइसकेको छ। वडाबासी मेरो उम्मेदवारीले उत्साहित भएका छन्। त्यसमा पनि पहिलेदेखि नै वडामा काम गरेको छु। जनताका पक्षमा काम गर्नेलाई नै जनताले माया गर्छन्। एमालले देखाएको राष्ट्रियताले पनि जनताको माया बढेको छ। यस कारण मैले जित्ने पक्का छ। जनताको माया र एमालेप्रतिको लहरले म ढुक्क भएको हुँ।
मुटु रोगीका लागि बी एन्ड बी अस्पताल वरदान
श्रमिकको हकहितका लागि मेरो उम्मेदवारी: राई
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जोगाउने २६ वर्षअघि
“संघीयतालाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको छ”
समृद्धिको आधारः उत्पादन सहितको व्यापार
फास्ट ट्रयाक निर्माणमा किचलो, अबको विकल्प के ?
बिदेशीले लगे नेपालबाट ३० गैडा
असार १५ पछि पोखरा– बागलुङ्ग राजमार्ग..
सरकारलाई सर्वोच्चको झापड
विषयगत कार्यालय हस्तान्तरणमा ढिलाइ
विषालु च्याउ खाएर एकैवडाका तीनको मृत्यु
ओली सरकारको चौतर्फी विरोध, सरकारविरुद्ध कांग्रेस..
नयाँ शक्ति पार्टीद्वारा ओलीको राजीनामा माग
साउन २ । आजको ई-पेपर
मुटु रोगीका लागि बी एन्ड बी अस्पताल वरदान सावित हुन्छ
चीन: सुरक्षा चिन्ता
अमेरिका: ज्वालामुखी विस्फोट
अफगानिस्तान: लडाकु मारिए
क्युबा: मोबाइलमा इन्टरनेट
गत आवमा ६२ अर्बभन्दा बढीको शेयर थपियो
विदुर गिरी (कामना)
रोहिणी घिमिरे (साधना)
अनलाइन प्राविधिक संयोजक
अनलाइन समाचार संयोजक